Ọnụ ọgụgụ 1 nọmba maka CMO na 2012 | Martech Zone
Ọnụ ọgụgụ 1 nọmba maka CMO na 2012
Tuesday, February 28, 2012 Tuesday, February 28, 2012 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị nwere ohere ibudata ya IBM Global Chief Marketing Officer nke ọmụmụ maka 2012, ọ bara uru ịgụ ya! Ma i nwere ike na- Nyocha CMO dị ka nke ọma!
Site na IBM Global CMO Study for 2012
Mgbe anyị na 1,734 CMO gbara ajụjụ ọnụ, gbasara ụlọ ọrụ iri na itoolu na mba 19, anyị maara na CMO na-enwe mmetụta agbatị, mana anyị nụkwara nnukwu ọitementụ banyere ọdịnihu nke ahịa. Mkparịta ụka ndị a na nyocha miri emi anyị na-achọpụta na-egosi mkpa ọ dị ịzaghachi ihe atọ ọhụụ:
The nyere ndị ahịa ikike ugbu a na-achịkwa mmekọrịta azụmahịa
Napụta ahịa ahịa dị oke mkpa - na omume nzukọ dị mkpa dị ka ngwaahịa na ọrụ ọ na-enye
Nsogbu bụrụ onye ga-aza ajụjụ na azụmahịa abụghị naanị ihe mgbaàmà nke oge siri ike, mana ngbanwe na-adịgide adịgide nke chọrọ ụzọ ọhụrụ, ngwaọrụ na nka.
Ọbịbịa nke mkpanaka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ị ga-eche na ha ga-ewere ọnọdụ mbụ maka ịbụ ihe dị mkpa maka CMO n'ụwa niile… mana ị ga-abụ ihe na-ezighi ezi.
Urua m na-ajụjụ ọnụ Troy Burk, nchoputa nke a ụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịa ahịa, ajụrụ m ya banyere ọnọdụ ha na ụlọ ọrụ ahụ. Nzaghachi ya dabara na ọmụmụ ihe CMO:
Mmekọrịta na-abịa tupu enweta ego na akwụkwọ ọkọwa okwu na azụmaahịa. Mbanye mmekọrịta ahụ ma ị ga-enweta ego ahụ. Ahịa Lifecycle Ahịa bụ ụzọ dị iche iche esi ele azụmahịa gị anya - gafee ọkwa niile nke ahụmịhe ndị ahịa. Ahịa na-arụ ọrụ dị oke mkpa iji hụ na mmemme na mkpọsa ziri ezi (ahịa, ahịa, na ọganiihu nke ndị ahịa) niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka njikọta na atụmanya kachasị mma / ndị ahịa gaa n'ihu ha na mmekọrịta ahụ, n'agbanyeghị ọkwa nke a bụ isi.
Ahịa Lifecycle Marketing Automation site Right On Interactive bụ naanị ihe ngwọta nke na-enye ọhụụ nke nzukọ ebe ndị ahịa ha niile na atụmanya dị na mmekọrịta (ma ọ bụ njem ndị ahịa). Site na onye a na-enyo enyo na onye ahịa na-eguzosi ike n'ihe. See na-ahụ ha niile ma jiri akpaaka na-akwalite njikọ aka ọzọ.
Ọ dị mma ịrụ ọrụ na onye nkwado na ndị ahịa nọ na ọnọdụ ndị a!
Tags: ahịa ahịa ndụezi ndị ahịanri na mmekọrịtaROI
Otu Afọ - Ọganihu 700% Na-agagharị
Tinye Companylọ Ọrụ LinkedIn Soro Button
Feb 28, 2012 na 12:34 PM
Agara m na IBM CMO Study Webinar nke m kwenyere na ọ bụ oge dị ukwuu, blọgụ gị hụrụ na ọ masịrị m etu i siri tinye ajụjụ ọnụ gị na nso nso a.